Mahay mamindra amin’izay efa nahalavo | NewsMada
Mahay mamindra amin’izay efa nahalavo
Loza iray, loza roa… Efa tsy takona afenina intsony amin’izao ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Faritra maromaro no iparitahan’izany, ary misy ny tranga ao anatin’ny fahasarotana. Mbola mampanontany tena ny sasany ihany amin’izao izay mety ho antony fototra mampirongatra ny aretina. Tsy nampoizina? Nefa tsy misy trangan-javatra kisendrasendra na mandeha ho azy amin’izao, fa misy antony sy vokany avokoa.
Ny fisokafan’ny sisintanin’i Madagasikara ve, ohatra, no mahatonga izao firongatry ny aretina tampoka izao? Tsy inona fa vokatry ny tsy fitandremana amin’ireo olona avy any ivelany? Mahabe resaka ny sasany ny hoe misy hatrany tafaporitsaka amin’ny seranana: tsy mandalo fitiliana na tsy mety atao izany, tsy manaiky hanao fihibohana… Tsy vitan’izany, mibananaka hatrany ny sisintanin’i Madagasikara, ka sarotra arovana.
Niditra avy any ivelany izao karazana andiany fahatelo izao? Fa nampihanaka izany moramora amin’ny faritra maromaro koa ny tandrevaka na tsy fitandremana eto an-toerana. Tsy inona fa ny tsy fanajana amin’ny antsipiriany sy manontolo ireo fepetra sakana ara-pahasalamana hisorohana ny valanaretina sy ny fiparitahany. Efa maro no tsy miraharaha na tsy mivaky loha, fa izay sarotiny amin’izany toa diso na adala.
Aleo averimberina sy ifampahatsiahivana ary ifampitandremana hatrany ny amin’izay fitandroam-pahasalamana izay? Tsy atao mandreraka izany, tsy mankaleo, tsy mahakivy… Aleo miteny na mety hotezerana sy homen-tsiny aza toy izay mijery fotsiny ny loza mby an-koditra, aleo malina hatrany na ihomehezana amin’ny loza ahina sy atahorana toy izay tratra vao hikoropaka amin’izay mety tsy misy azo atao intsony…
Tsy efa tokony hanovana ny fomba fijery sy fihetsika ve izay niaingana sy nanjo tamin’ny firongatry ny aretina andiany voalohany, indrindra ny andiany faharoa? Na ny efa nahavoa no ndeha mbola iniana hiverenana noho ny tsy fitandremana amin’izay efa fantatra mialoha izao… Mba mahay mamindra amin’izay efa nahalavo?